रक्सी र ‘यौ’, न भन्दा पनि ठुलो नशा इन्टरनेटको ! – रक्सी र ‘यौ’, न भन्दा पनि महत्वपुर्ण वाईफाई – Ujyaalo Patrika
रक्सी र ‘यौ’, न भन्दा पनि ठुलो नशा इन्टरनेटको ! – रक्सी र ‘यौ’, न भन्दा पनि महत्वपुर्ण वाईफाई
एजेन्सी । समय अनुसार चल्न जान्नु पर्छ । नत्र लाटो भईन्छ र सधैं पछाडि मात्रै परिन्छ । भन्ने कुरा अहिलेको जेनेरेशनमा देखिएको छ । जति पनि प्रविधि बढ्दै जान्छन् त्यति नै तिव्ररुपमा मानिसहरुको जिन्दगी पनि बर्बाद भइरहेको छ । इन्टरनेटको बढ्दो लतले मानिसहरु पुरै तरिकाले एक्लै भएका छन् । यसको नशा यति चढेको छ कि मानिसहरुले रक्सी र यौ७ न जीवनसम्म नै छाड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
हाल अमेरिकामा गरेको एक अध्ययनले इन्टरनेटको नशा बढ्दै गएर पुरै परिवारको समय खराब गर्नमा कुनै कसर नछाडेको बताएको छ । १५ सय मानिसमा गरेको अध्ययनले औसत युवाहरु आफ्नो फोन बिना १६ घन्टा पनि रहन नसक्ने पत्ता लागेको छ । एक तिहाई सहभागीको अनुसार आवश्यकता भन्दा धेरै समय आफ्नो मोबाईल, ल्यापटप वा ट्याबलेटमा गुर्जाछन् ।
२४ प्रतिशत मानिसहरु मोवाइलकै कारण धेरै घटनाका सिकार भएको बताए । उनीहरुले आफ्नो मोवाइल आफु भन्दा ३ फिट भन्दा धेरै टाढा नराख्ने पनि जानकारी दिए । केही सहभागीले मोवाइलको कारण पुरै परिवारको बिदाको दिन बर्बाद गरीदिएको पनि बताए । ४७ प्रतिशतले मोवाइल बिना कतै नजाने र जहाँ गएपनि नेटवर्कको खोजीमा समय बिताउने जनाए ।
४१ प्रतिशतले विशेष कार्यक्रममा जानुको कारण सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नकै लागि भएको जानकारी दिए । एक महिलाले सुतेको समयमा पनि आइप्याड आफुसँगै सुताउने गरेको बताइन् । यस अनुसन्धानबाट वाईफाई पासवर्ड पाएमा सबै आफ्ना प्यारा चीज छाड्न तयार हुने पत्ता लागेको छ । धेरै मानिसहरुले र,क्सी छाड्ने बताए भने कसैले यौ७ न सम्बन्ध बरु नचाहिने पनि बताए ।
Previous आफ्नो श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै श्रीमतीले युवतीको यौ, ना,ङ्गमा खुर्सानी दलिदिइन् !
Next अचम्मको चलन : जहा बिहे गर्नको लागि ब’,ला’त्का’र गर्नुपर्ने . . .